Tsy nandray vatsim-pianarana enim-bolana : nidina an-dalambe ny mpianatry ny oniversiten’Andrainjato | NewsMada
Tsy nandray vatsim-pianarana enim-bolana : nidina an-dalambe ny mpianatry ny oniversiten’Andrainjato
Nanao diabe ny mpianatry ny oniversite Fianarantsoa, omaly. Niatrana ny Emmo/Reg nanoloana izany. Efa nangitakitaka nahita ny hamaroan’ny mpianatra ny olona.
Nitokona ireo mpianatry ny oniversiten’Andrainjato, Fianarantsoa, omaly. Nivory tao amin’ny faritry ny oniversite ireo mpianatra ary nanapa-kevitra fa hanao diabe hamakivaky ny tampon-tanànan’i Fianarantsoa. Niroso tamin’izany tokoa ireo mpianatra, izay efa nandrasan’ny Emmo/Reg teny amin’ny manodidina teny. Tsy nisy ny korontana na izany aza, fa nizotra tamim-pilaminana izany.
Araka ny vaovao avy any an-toerana, noho ny vatsim-pianarana enim-bolana mbola tsy voarain’ireo mpianatra ireo no anton’ny fitakiana. Milaza ny hanohy ny hetsika ireo mpianatra ireo, ary hanamafy izany, raha tsy mahazo valiny haingana. Efa nisehoana resaka tsy fandoavana vatsim-pianarana enim-bolana ihany koa ny mpianatra sasany teny amin’ny oniversite Ankatso ary nisy ny fitokonana, saingy nilamina vetivety izany.
Ireto mpianatry ny oniversite Fianarantsoa ireto izay mahery fihetsika ihany koa rehefa misy ny hetsika ataony. Manampy trotraka ny mety ho fanararaotana politika ataon’ny sasany, indrindra amin’izao toe-draharaha mafampana izao.
I Fianarantsoa rahateo, anisan’ny itrangana toe-javatra hafahafa matetika, raha tsy ampahatsiahy afa-tsy ilay firehetana tao amin’ny Jirama farany teo. Firehetana niniana natao izay tsy mbola nahazoana vaovao ofisialy ny anton’ny fandorana. Asan-jiolahy sa ambadika politika?